Lacagta laga qaato Finland, maxey ku filan tahay? - Asylum in Finland
Lacagta qaabilaadda waxaa loogu talagalay baahida aasaasiga ah ee aan laga maarmin sida cuntada, dharka iyo kharashaad yayar ee ku baxa daryeelka caafimaadka. Xarumaha qaabilaadda qaarkood waxaa lagaa siinayaa maalin kasta cunto, qaarkoodna adiga ayaa cuntada ku karsan kara. Haddii aad cuntada ka hesho xarunta, tirada lacagta qaabilaaddu waa ka yartahay. Haddii aad adigu cuntada karsaneyso, waa in aad lacagta qaabilaadda ka soo iibsataa cunto.
Lacagta qaabilaaddu waxey noqon kartaa 3 yuuro maalinti
Tirada lacagta qaabilaaddu waa isbedeshaa, codsadayaasha oo dhanna lama siiyo kaalmadan. Haddii uu codsaduhu leeyahay hanti ama uu shaqaaloobo uuna billaabo mushaar qaadasho, tirada lacagta qaabilaadda ee la siinayo waa yaraaneysaa ama gebi ahaanba lama siinayo.
Qeybta asaasiiga ah ee lacagta qaabilaadda yuuro ahaan sanadka 2018:
Aan cuntooyin la siin
€ Cuntooyinka xarunta qaabilaadda
Kali deggan ama kaligiis mas’uul ah 312,23 91,52
Kuwa kale ee ka weyn 18 sano 263,78 75,36
Cunugga qoyskiisa la deggan 199,18 59,21
Lacagta isticmaalka bishii ee megangelyo-doonaha aan qaangaarin ee kaligiis yimid oo yuuru ah sanadka 2018:
Cuntooyinka xarunta qaabilaadda
Kaligiis yimid kana yar 16 sano jir * 26,92
Kaligiis yimid oo 16- 18 sano jir u dhexeeya * 48,44
* Lacagta isticmaalku waa ay ka yaraan kartaa intan, haddii iyadoo laga eegayo dhinaca da’da iyo heerka koriinshaha cunugga sabab loo helo.
Finland cuntada, degitaanka iyo adeegyadu waa qaali marka la barbardhigo wadamo kale oo badan. Celcelis ahaan 20% ayeey cuntadu Finland ka qaalisan tahay wamada kale ee Midowga Yurub. Isbabardhigga sicirka cuntada sida ku xusan baaritaanka, Finland waa dalka 7aad oo Yurub ah ee ugu qaalisan.